Fakafaka tononkaloPosté par Berïnson 2015-03-08 08:59
Andeha homarihintsika amin'ny tononkalon'i DadaRabe "Ô ry Zenevievy" ny andro anio, 08 martsa, andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Notsongaina manokana tamin'ireo tononkalo aman-jatony navoakan'i DadaRabe ao amin'ny boky amboaran-tononkalo Tiako, tena tiako! (2015, tak. 66) izy ity noho ny hevitra lalina fonosiny.
Raha ny firafitry ny tononkalo no resahina dia andininy efatra mitovy, samy mirakitra andalana enina avy ary miady rima AABBCC... no mandrafitra azy. Teny tsotra fampiasa andavanandro ny teny ampiasain'ny mpanoratra ary mivantana ka mora azo ny hafatra tiana ambara amin'ity tovovavy mitondra ny anarana hoe Zenevievy ity.
Eo amin'ny andininy voalohany dia mitanisa ireo zavatra tsara ananan'i Zenevievy ny poeta: tsara endrika, bolangina takolaka sy manganohano maso. Izany tokoa no fomba mahomby indrindra raha hanolotra tsikera ny tena: asongadina aloha ireo lafitsara vao tononina ny indro kely.
Be lalao any ivelan'ny trano i Zenevievy araka ny eo amin'ny andininy faharoa ary mampitandrina ny tena zava-misy izy mba hieritreretan'i Zenevievy. "Jiolahy no betsaka any!", hoy izy tsy misalasala. Ao an-trano ny toerana tsara indrindra. Iza tokoa moa no tsy hiato hisaina raha maniry tokoa hampidi-doza ny fiainany amin'izay jiolahy any ivelany?
Asa anefa na naniratsira sy nanampin-tsofina fotsiny i Zenevievy ka lasa ihany fa bedy sy voatrerona mihitsy. Eo amin'ny andininy fahatelo dia vao mainka mitanisa ny tsy mety ataon'i Zenevievy ny mpanoratra. "Manaram-po miliba sy tia manivaiva", hoy izy tezitra mafy satria ny ray aman-dreny mila "ho lasa adala" araka ny tononiny eto dia azo antoka fa ireo miandry ao an-trano.
Tsy mitsikera be fahatany an'i Zenevievy anefa ny mpanoratra na izany aza fa manolotra soso-kevitra koa ny amin'izay tokony hatao. Tokony hiova i Zenevievy. Eo amin'ny andininy fahaefatra sady farany dia tsy afeniny ny tebiteby sy fanahiany ny amin'ny hoavin'i Zenevievy. Nahoana tokoa moa no tsy hanahy manoloana ny zava-misy sy "korontana"?
Eto am-pamaranana dia tiako ny manamarika fa ny 'Zenevievy' dia anarana amin'ny teny frantsay izay nogasian'i DadaRabe. Anarana mampihomehy sy tsy dia manintona firy. Rehefa namaky fanindroany ny tononkalo anefa aho dia navadiky ny masoko ho 'a' ny 'e' ka novakiako ho 'Zanaviavy' ny 'Zenevievy'. Zanaka vavy... na zana-behivavy. Ny zanaka rehetra, na lahy na vavy. Noho izany, azo ampiharina amin'ny zanaka rehetra ity tononkalo ity rehefa dinihina lalina. Zanaka malagasy. Zanaka variana.